politika fiarovana fiainan'olona | SActivator.com
sactivator.com dia manaiky fa ny fiainana manokana ny mombamomba no zava-dehibe. Ireto ny vaovao momba izay karazana ny mombamomba azontsika ka manangona rehefa mampiasa 'sactivator.com', Ary ahoana no hiaro ny vaovao.
Izahay tsy hivarotra ny mombamomba ny antoko fahatelo.
Mampiasa fahatelo-antoko dokam-barotra ireo orinasa mba hanompo dokam-barotra rehefa mitsidika ny tranonkala. Mety misy ny doka mofomamy izay mety ho ampiasaina ny dokam-barotra orinasa mba hahatakatra tsara kokoa ny tiany ny mpitsidika ary manampy azy ireo mba hampiseho mifandray dokam-barotra. Na izany aza, ny mofomamy nandray ny dokam-barotra dia nangonin'ny ny dokam-barotra sy ny orinasa tsy afaka mampiasa izany vaovao. Mety hampiasa ireo orinasa vaovao (tsy ao anatin'izany ny anaranao, adiresy, adiresy mailaka, na ny antso an-tariby isa) momba ny fitsidihana izany sy ny vohikala hafa mba hanome dokam-barotra momba ny fananana sy ny asa mahaliana ho anao.
Mampiasa fahatelo-antoko dokam-barotra ireo orinasa mba hanompo dokam-barotra rehefa mitsidika ny tranonkala. Mety hampiasa ireo orinasa vaovao (tsy ao anatin'izany ny anaranao, adiresy, na ny adiresy mailaka) momba ny fitsidihana izany sy ny vohikala hafa mba hanome dokam-barotra momba ny fananana sy ny asa mahaliana ho anao. Raha tianao bebe kokoa momba io fanao, ary te hahafantatra ny safidy raha oharina amin'ny·Tsy manana vaovao izany ampiasain'ny ireo orinasa.